Iikholeji ze-Utah: I-SAT Itheyibhile yokufanisa
Ukuqhathaniswa koMgca-nge-Side we-Admissions Data kwiikholeji zase-Utah
I-Utah eninzi kakhulu yabantu abanakho iikholeji zeminyaka emine, kodwa abafundi baya kufumana iintlobo zezikolo kunye nobuntu obuhle. Izinketho zivela kwiiyunivesithi ezinkulu zikarhulumente ziye kwiikholeji. Ukukunceda ukwazi ukuba ngaba izikolo zakho zokuhlola zijoliswe kwizikolo zakho ezikhethiweyo zase-Utah, itekisi elingezantsi linokukunceda ukukukhokela.
ISAT izikolo zeeKholeji ze-Utah (phakathi kwe-50%)
IBygham Young University 580 690 580 690 - -
Dixie State University kuvunywa
KwiYunivesithi yase-Utah 450 580 450 570 - -
University of Utah Valley kuvunywa
University of Weber kuvunywa
KwiYunivesithi yeeNtshona kuvunywa
IWestminster College 500 610 500 600 - -
Amanqaku e-SAT etafileni aphakathi kwama-50% abafundi ababhalisile. Ukuba amanqaku akho awela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujolise ekujoleni kwelinye leekholeji ze-Utah. Ukuba amanqaku akho angaphantsi kwele fayile eboniswe kwitheyibhile, ungalahlekelwa yiphina ithemba - khumbula ukuba ama-25% abafundi ababhalisile bafumana izikolo ze-SAT ngaphantsi kwezo zidweliswe. Uya kuphawula ukuba iikholeji ezininzi ze-Utah zivule imvume yokungena. Oku akuthethi ukuba wonke umntu uya kufumana - iikholeji ezininzi zinemfuneko encinane yokumkelwa.
Kwakhona kubalulekile ukubeka i-SAT ngokufanelekileyo. Uvavanyo luyingxenye enye yesicelo, kwaye irekhodi elomeleleyo lezemfundo libaluleke ngakumbi kuneendlela zokuvavanya. Iikholeji ezininzi ziya kukhangela isicatshulwa esiphumeleleyo , imisebenzi enentsingiselo yecandelo elongezelelweyo kunye neencwadi ezinamandla zokucebisa .
Indlela yokwenza iPokeberry Ink
Iincwadi eziphambili zeKrisimesi ze-Pop-up zeBantwana kunye nabantu abadala